Ny fiarovana ny angon-drakitra sy ny fitazonana ny tsiambaratelon'ny Mpampiasa dia azo atao amin'ny angon-drakitra ataon'izy ireo. Ny fampahalalana dia tsy maintsy azo mandritra ny fijanonan'ny mpandray anjara amin'ilay tranonkala na rehefa mampiasa loharanon-karena ny The Avalanches Free Social journalism Project sy ny asany izy ireo.
Tsy haino aman-jery io. Ny mpiasanay dia tsy manana birao fanovana hanovana ny lahatsoratra mahasoa. Tsy tompon'andraikitra mivantana amin'ny fitaovana apetraka amin'ny pejiny ny loharano.
Ny fitsipiky ny fiarovana ny fampahalalana (eto dia antsoina hoe ny Politika) dia mandrakotra ny angon-drakitra izay azon'ny tetikasa Avalanches avy amin'ny Mpampiasa rehefa mifanerasera amin'ny Loharano. Ny mpampiasa dia tsy maintsy mampiasa ny serivisy, ny vokatra na ny endri-javatra an'ny Avalanches (izay antsoina hoe ilay Tetikasa na Loharano). Ny Resource dia tsy maintsy mamarana ny fifanarahana na fifanarahana amin'ireo mpandray anjara amin'ny tetikasa mba hiarovana ny angon-drakitra.
Ny tetik'asa Avalanches dia miaro manokana ny angon-drakitra ny mpandray anjara ary manaja ny zon'izy ireo tsiambaratelo. Noho izany, nahazo famaritana ny Politika:
mombamomba ny mpikambana, narotsaky ny Avalanches Resource
ny tanjon'ny fikirakirana sy ny fanangonana angon-drakitra raha mpampiasa mampiasa ny Avalanches Resource;
ny fitsipika ivoahan'ny fampahalalana voaray avy amin'ny tranokala Avalanches Project.
Amin'ny fampiasana ny Resource, ny mpampiasa dia manaiky sy manaiky ny fanodinana ny angon-drakitra an-tsitrapo. Ny lisitr'ireo angona ireo dia voalaza eto amin'ity Politika ity. Raha misy ny tsy fitovian-kevitra, tokony hitsahatra tsy hitsidika ny tranokalan'ny Project ilay mpandray anjara na manantona ny Tetikasa amin'ny pejy Facebook-tsika mivantana: https://www.facebook.com/avalanches.global
Resource Avalanches dia mamakafaka sy manangona angona manokana miaraka am-panajana lehibe. Ity dia momba ny:
angona azo rehefa nameno ny taratasy fisoratana anarana, fanomezan-dàlana ary famantarana ny Mpampiasa ao amin'ilay tranonkala;
angona avy amin'ny rakitra cookie;
Adiresy IP sy toerana.
Ny angon-drakitra manokana an'ny mpampiasa Avalanches.com dia voatahiry ao amin'ireo mpizara voaro.
Ireo mpampiasa Avalanches.com dia tokony hahafantatra ny zava-misy fa ny rohy sasany navoaka tao amin'ny sehatray dia mety hitarika loharano tsy azo antoka (tranokala, fampiharana, sns.) Ivelan'ny Platform misy anay izay mety hijinja ny angon-drakitra ihany koa. Ny anjarantsika dia tsy mandray andraikitra amin'ny tahirin-kevitra voajinja na vokany hafa amin'ny fanarahana rohy ivelany navoakan'ny Mpampiasa anay tao amin'ny avalanches.com.
Ny angon-drakitra manokana an'ny mpampiasa ny sehatra Avalanches.com dia zakain'ny Avalanches LP izay soloin'ny olona iray voasoratra eo ambanin'ny lalàn'ny Repoblikan'i Irlandy, miaraka amin'ny birao voasoratra ao amin'ny Office 29, Clifton House, Fitzwilliam Street Lower, Dublin 2, D02 XT91 (manaraka eto - Orinasa). Ny orinasa dia tompon'ny Data Base izay mitahiry ny Data momba ny mpampiasa manokana Avalanches.com.
Angon-drakitra ho an'ny mpampiasa izay azo zahana amin'ny alàlan'ny Tetikasa Avalanches
Ny fampahalalana toy ny adiresy mailaky ny mpampiasa na ny nomeraon-telefaona ary ny teny miafina dia ilaina amin'ny famoronana kaonty. Tsy afaka ny ho tonga mpampiasa avalanches.com ianao raha tsy mizara angona tahaka izany.
Ny fampahalalana rehetra omen'ny mpandray anjara an-tsitrapo, manokana ary mifandraika amin'ny olona iray dia heverina ho angon-drakitra manokana an'ny mpandray anjara. Ny mpampiasa anay dia miantsoroka andraikitra feno amin'ny angon-drakitra manokana omeny ao amin'ny avalanches.com.
Ny nomeraon-telefaona dia takiana mba hanamarinana ny mpampiasa iray ary hanomezana fidirana amin'ny sehatra feno amin'ny Serivisinay.
Ny angon-drakitra manokana an'ny mpandray anjara hozahana dia heverina ho tahirin-kevitra rehetra omena mandritra ny fisoratana anarana na amin'ny dingan'ny fampiasana ny Resource. Ny data dia ampitaina ary apetrak'ireo mpandray anjara an-tsitrapo amin'ny tranokala, ao anatin'izany ny fampahalalana ampitaina amin'ny Resource avy amin'ny serivisy Internet hafa na tambajotra sosialy (mailaka, sary, anarana, miralenta, taona, diplaoma akademika, sns.).
Ny data izay ampitaina ho azy amin'ny Project raha mampiasa ny tranokala dia ampiasaina ihany koa ho an'ny fanodinana. Ny data dia ampitaina amin'ny alàlan'ny rindrambaiko an'ny mpandray anjara napetraka ao amin'ny fitaovany. Ity loharanom-baovao ity dia mandray ho azy izao:
Adiresy IP mpikambana
angona avy amin'ny cookies;
masontsivana ara-teknikan'ny fitaovan'ny Mpampiasa;
fampahalalana momba ny rindrambaiko ampiasain'ny mpandray anjara amin'ny tetikasa;
daty sy ora ahazoana miditra Avalanc;
tantaram-piainana sy fangatahana pejy, ary koa fampahalalana hafa mitovy toetra aminy.
Ny tetik'asa Avalanches dia tsy manamarina ny maha-marina ny angona manokana nomen'ny Mpampiasa. Rehefa mampiasa sy misoratra anarana amin'ny Tetikasa, ireo mpandray anjara dia manome antoka ny fahafenoana sy ny fampifanarahana ny fampahalalana omena azy manokana.
Tolotra sy fifampiraharahana: Raha te-ho sehatra ho an'ny fifanarahana ara-barotra, fifanakalozam-bola, na fanomezana, ny Platform dia omena alalana hampiseho ny mombamomba ny fifandraisana amin'ny mpampiasa, izay tena ilaina mba hanombohana fifanarahana eo amin'ny Mpividy sy ny mpivarotra. Tompon'andraikitra feno amin'ny fampahalalana mifandraika amin'ny tranonkala ireo mpampiasa. Tokony ho fantatry ny mpampiasa fa ny fampahalalana momba ny fifandraisany na ny adiresy an-trano aza dia azo aseho ampahibemaso ao amin'ny Platform mba hahafahana manao Fifanarahana.
Taorian'ny nifandraisan'ny Mpampiasa iray tamin'ny fanohanan'ny Platform, dia mitazona ny fahefana hangataka fampahalalana manokana fanampiny ny Platform mba hanamarinana bebe kokoa ilay mpampiasa.
Ny angona momba ny mpampiasa avy amin'ireo mombamomba ny tany ivelany izay nampiasaina hanoratana ny mombamomba ny mpampiasa ao amin'ny avalanches.com amin'ny alàlan'ny serivisy fanamarinana (Facebook, Google, sns.) Dia omen'ny Avalanche fikirakirana.
Ny tanjon'ny fikirakirana ny loharano Avalanches dia:
Famantarana ny mpandray anjara amin'ny Tetikasa, ary koa ny fifanarahana sy fifanarahana amin'ny Resource.
Ny fanomezana tolotra misimisy kokoa sy ny fampiharana ny fifanarahana na fifanarahana isan-karazany miaraka amin'ilay mpandray anjara.
Ny fifandraisana amin'ny Mpampiasa, ao anatin'izany ny fangatahana sy ny fampandrenesana, ary koa ny fandefasana vaovao mifehy ny fampiasana ny tranokala, ny fanatanterahana ny fifanarahana sy ny fifanarahana, ary koa ny fanodinana ny fangatahana sy ny fangatahana voaray avy amin'ilay mpandray anjara.
Fanatsarana ny kalitaon'ny Resource, ny asany, ny atiny ary ny atiny fampahalalana.
Famoronana fitaovana fampiroboroboana kendrena ho an'ny mpihaino liana.
Fanangonana tahiry ho an'ny fanadihadiana isan-karazany, ao anatin'izany ny statistika, miorina amin'ny angona tsy fantatra anarana.
Fampahalalana izay tsy voavaha na nangonin'ny Avalanca
Ny angon-drakitra ataon'ny mpampiasa manokana momba ny vakoka ara-poko, ny fomba fijery ara-politika na ara-pivavahana sy ny finoana, ny fandraisana anjara amin'ireo antoko politika, ireo sendika, sns.
Fomba, fomba ary fepetra hanodinana ny angon-drakitra momba ny mpampiasa
Ny Avalanches Resource dia tsy manangona afa-tsy ny angon-drakitra omen'ny mpandray anjara an-tsitrapo mandritra ny fisoratana anarana na ny fanamarinana ao amin'ny tranokala Avalanches na amin'ny alàlan'ny kaontin'ny serivisy Internet hafa, ary koa ny angona izay afindra ho azy amin'ny Resource avy amin'ireo fitaovana sy rindrambaiko an'ny mpandray anjara ao amin'ny dingana amin'ny fampiasana ny tranokala (cookie sy karazana data hafa voalaza ao amin'ny Privacy Privacy).
Ny avalanc dia mitazona tsiambaratelo momba ny angon-drakitra amin'ny lalàna anatiny.
Tazonina ny tsiambaratelo momba ny angon-drakitra, afa-tsy amin'ny tranga izay nanaovan'ny Mpampiasa an-tsitrapo ny famoahana fampahalalana sasany ho an'ny fidiran'ny besinimaro ao amin'ilay tranokala na amin'ny alàlan'ny asany.
Fepetran'ny famindrana ny angon-drakitra ho an'ny antoko fahatelo
Ny famindrana ny angon-drakitra ho an'ny antoko fahatelo dia azo atao amin'ireto tranga manaraka ireto:
Nanaiky ny famindrana ampahan'ny data-ny ny mpampiasa.
Ho an'ny fampiasana mahafinaritra ny fiasan'ny Resource na fanatanterahana fifanarahana na fifanarahana.
Ilaina ny famindrana mba hanomezana ny mpandray anjara ny serivisy na ny asan'ny Loharano omen'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny tranonkala mifandraika amin'ny tranonkala ara-teknolojia. Ny data manokana dia azo afindra amin'ny fanodinana na fanatratrarana tanjona, izay nofaritan'ny Fifanarahana ho an'ny mpampiasa miaraka amin'ireo serivisy mifandraika amin'izany.
Ny famindrana dia omen'ny lalàna ao amin'ny tanin'ny Mpampiasa izay onenany na azo ampiharina.
Ny antoko fahatelo dia afaka mamindra amin'ny angona manokana azonao mandritra ny karazana fandalinana na fandrefesana isan-karazany, ao anatin'izany ny statistika, ho an'ny fanadihadiana sy ny fanomezana serivisy na ny asa amin'ny torolalan'ny Tetikasa;
Ny loharanom-pahalalana dia mampihena ny fahafaha-miditra amin'ny angon-drakitry ny mpandray anjara, manokatra fidirana amin'ny mpiasa ao amin'ny tranonkala sy mpiara-miombon'antoka izay mila ity fampahalalana ity fotsiny mba hanatanterahana asa na hiantohana ny fahombiazan'ny Tetikasa.
Fepetran'ny fidirana amin'ny angon-drakitra ho an'ny mpampiasa hafa
Ny angon-drakitry ny mpampiasa dia afaka miditra amin'ny alàlan'ny Mpampiasa Platform iray ao amin'ny faritra Fair ao amin'ny tranokala avalanches.com mba hanombohana fifampiraharahana eo amin'izy roa. Ny fampahalalana toy izany dia mety tsy inona fa ny fampahalalana mifandraika (adiresy mailaka, nomeraon-telefaona, na rohy media sosialy) sy ny adiresy toerana.
Ny Platform dia mitazona ny zony hizara ny angon-drakitra momba ny tsiambaratelon'ny mpampiasa amin'ny lalàna araky ny lalàna eo an-toerana: mijanona ary mitondra ny andraikitr'ireo mpisandoka andraikitra, manadio ny tsy fifankahazoan-kevitra, na mamerina ny adihevitra izay mety / manitsakitsaka ny lalàna eo an-toerana. Ary koa, ny Platform dia mety hamoaka ny angon-drakitra momba ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fahitana ny fikasana tsy ara-dalàna mitranga ao amin'ny tranokala na amin'ny alàlan'ny fandraisana fitarainana avy amin'ireo mpampiasa hafa.
Fitehirizana, famafana ary fanovana ny angon-drakitra ho an'ny mpampiasa
Ny mpampiasa dia manana ny zony sy ny fahaizany amin'ny fotoana rehetra hampiasana ilay tranokala hanovana ampahany na tanteraka ny angon-drakitra hampiasàny ny asa fanitsiana kaonty rehefa mitsidika ny kaonty manokana momba ny Resource.
Ny mpampiasa dia manana ny zony sy ny fotoana ilaina amin'ny fotoana rehetra hamafana tanteraka ny angon-drakitra omena azy rehefa misoratra anarana ao amin'ny tranokalan'ny Project amin'ny famafana kaonty. Na izany aza, izany dia mety hiteraka fameperana ny fahazoan'ny mpandray anjara andraikitra sasany amin'ny tranokala.
Ny angona manokana dia voatahiry mandritra ny fotoana rehetra ampiasanao ny kaonty amin'ilay tranokala. Izy io koa dia mitahiry data izay tsy mila mpandray anjara voasoratra anarana na hetsika misy fifanarahana na fifanarahana. Ny famaranana ny fampiasana sy ny famaranana ny fifanarahan'ny mpampiasa ny kaonty ao amin'ny tranokala Resource dia heverina fa ny famafana ny kaontin'ny mpikambana.
Kaontera, cookies, tambajotra sosialy
Manangona fampahalalana ho azy momba ny fampiasana ny fiasan'ny tranonkala amin'ny alàlan'ny cookies ny pejy an'ny Tetikasa. Ny angon-drakitra azo tamin'ny fanampian'izy ireo dia natao hanomezana anjara andraikitra manokana ho an'ny mpandray anjara, hanatsara, hiteraka fanentanana dokam-barotra, ary koa hanao fanadihadiana isan-karazany.
Ny fampiasana asa sasany an'ny Resource dia tsy azo omena raha tsy avela sy voaray ny cookies. Raha mandrara ny fahazoana na ny fanekena ny cookies ny mpandray anjara amin'ny fanovana ny toeran'ny mpitety tranonkala, dia mety voafetra ny fidirana amin'ny fizotran'ny tranokala toy izany.
Ny cookies sy ny kaontera apetraka amin'ny pejin'ny tranokala Project dia azo ampiasaina hanangonana, hanodinana ary hamakafaka avy eo ny fampahalalana voaray momba ny fifandraisan'ireo mpandray anjara amin'ilay tranokala, mba hiantohana ny fiasan'ny asany na amin'ny ankapobeny. Ny masontsivana ara-teknikan'ny metatra dia napetraky ny Tetikasa ary mety miova tsy misy fampandrenesana mialoha ho an'ny Mpampiasa.
Ao anatin'ny asan'ny tranokala, misy singa toy izany amin'ny tambajotra sosialy toy ny bokotra «Share» sy fandaharana ifanakalozana hevitra ho fanamarihana sy fanarahana ny fihetsiky ny mpandray anjara amin'ny vaovao voaray. Ny singa tambajotra sosialy dia manoratra ny adiresy IP an'ny Mpampiasa, ny fampahalalana momba ny asany sy ny fifandraisany amin'ny tranokala Resource, ary koa mamonjy cookies mba hiantohana ny fiasan'ireo singa sy subprograms marina ireo. Ny fifandraisan'ny Mpampiasa amin'ny endrika tambajotra sosialy dia fehezin'ny politikan'ny tsiambaratelo momba ny loharano sy ny orinasa manome azy ireo.
Fepetra fiarovana ny data ho an'ny mpampiasa
Ny loharanom-pahalalana dia mandray fepetra ara-teknika sy fandaminana mba hiantohana ny haavon'ny fiarovana ny data manokana sy tsiambaratelo amin'ireo hetsika tsy ara-dalàna ataon'ny antoko fahatelo na malware, ohatra, fanimbana, fanakanana, fanovana, fanaovana kopia, fizarana na fidirana tsy nahy, sy ny hafa.
Ny fiovana amin'ny politika dia mety hisy fiantraikany amin'ny lalàn'ny firenena izay misokatra ny fidirana amin'ny tranokalan'ny Tetikasa na ny fepetra takian'ny lalàna iraisam-pirenena.
Manan-jo hanitsy ny Politika ankehitriny ny loharano. Rehefa manao ny fanovana mety amin'ny fanontana ankehitriny, dia aseho ny datin'ny fanavaozana farany azy. Ny fanontana vaovao dia nanomboka tamin'ny fotoana namoahana azy tao amin'ny tranokala raha tsy mifanohitra amin'ny kinova vaovao amin'ny Politika sy ny lalàn'ireo firenena izay misokatra ny fidirana amin'ny tranokala Project.
Manan-jo tsy hamoaka atiny (lahatsoratra, hevitra, fanambarana sns) voaray avy amin'ny mpampiasa ireo mpampanonta loharano, raha toa ka azon'ireo Mpamoaka Tetikasa atao hoe antso ho an'i:
fananganana fifandonana eo amin'ny samy lahy na vavy;
fanararaotana ara-tsaina na ara-batana;
ny fanatanterahana asa fampihorohoroana, fanimbana olona, tsy fankatoavana sivily;
fanondranana olona, fanandevozana na pôrnôgrafia.
Manan-jo tsy hamoaka vaovao hafa ihany koa ny tonian-dahatsoratra izay manitsakitsaka ny rafitra ara-dalàna an'ny firenena onenan'ilay Mpampiasa na ny lalàna iraisam-pirenena.
Andraikitry ny Mpampiasa sy ny mpampiasa
Izay fampahalalana izay navoakan'ny mpandray anjara iray tamin'ny tranokala ho azy, dia apetrany an-tsitrapo ao amin'ny tranonkalan'ny Tetikasa. Hivoaka ny fampahalalana raha toa ka mandalo alalana amin'ny SMS ny mpandray anjara amin'ny fanamafisana ny toerana misy azy eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fifanarahana sy ny lalàna momba ny fametrahana ny Resource. Amin'ny ho avy, ny mpandray anjara dia tompon'andraikitra amin'ny fahamarinan'ny zavatra navoaka manokana.
Ny tompon'andraikitra amin'ny tetikasa dia tsy tompon'andraikitra amin'ny maha marina ny fampahalalana navoaka tao amin'ilay tranokala.
Ny fitsipiky ny Tetikasa dia mandrara ny fanaovana kopia sy ny fandefasana amin'ny pejin'ny fampahalalana momba ny loharanom-pahalalana izay eo ambanin'ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona.
Mandràra ny fanaovana kopia sy fanaparitahana vaovao avy amin'ny pejin'ny tranokalan'ny Tetikasa raha tsy misy ny fahalalana sy ny faneken'ny tenanao manokana an'ny mpanoratra.